Qubaro: ''Waa kadeed in booliska ay dadka ku dhex weydiiyaan kaararka aqoonsiyada tareenada hoos mara,, - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hanaanka tareenada dhulka hoose mara ee Stockholm. Photo:Ingvar Karmhed/Scanpix
Qubaro: ''Waa kadeed in booliska ay dadka ku dhex weydiiyaan kaararka aqoonsiyada tareenada hoos mara,,
La daabacay tisdag 26 februari 2013 kl 11.54
Qabiir xaquuqda aadanaha ayaa sheegay, in ololaha socda ee booliska ku weydiinayaan kaararka aqoonsiga ee dadka ku goosha tareenada dhulka hoostooda mara ee magaaladda Stockholm, uu ka horimaanayo xeerka yurub ee xaquuqda aadanaha.
Henrik Berggren, oo sidoo kale ah ku xigeynka agaasimaha xafiiska golaha wasiirada oo qoraal ku soo bandhigay wargeyska Svenska Dagbladet ayaa sheegay in booliska looga baahanyahay in ay heystaan sabab xambaarsan shaki maquul ah oo ay ku xiraan qofka, waxuuna intaasi uu ku sii daray in Iswiidhan ay u badan tahay in ay guul daro kala kulanto haddii arrinkan koontoroolka kaararka aqoonsiga la geeyo maxkamada xaquuqda aadanaha ee yurub.
Aqoonyahan kale oo lagu magacaabo Said Mahmuudi ahna qabiir xaquuqda caalamiga ayaa isaga aminsan arargti la mid ah mida Henrik isaga oo sheegay in ay tahay arrin dhib badan oo kadeed ah kolka booliska ay dadka ku dhex weydiiyaan tareenada dhulka hoose mara kaararka aqoonsiga basle Professor Mahamuudi ayaa sheegay in aan si buuxda loo hubin in tallaabooyinka booliska ay dadka ku weydiinayaan aqoonsiyada ay ka hor imaaneyso xeerka yurub ee xaquuqda aadanaha.
Toddobaadkii aynu soo dhaafnay, afhayeen u hadlay booliska ayaa u sheegay telifishinka Svt in diidradooda saaran tahay dadka muuqaalada janabiga leh si loo gaaro hadafka dowlada ee ah in dalka laga masaafuriyo shisheeyaha aan heysan sharciga deganaanshaha Iswiidhan.
Balse wasiirka is dhexgalka Erik Ullenhag ayaa sheegay in tallaabadaasi ay si gaar ah ugu abuureyso jawi cabsi ah qaar ka mid ah bulshada waxuuna intaasi ku daray in aysan habooneyn in booliska ay ku weydiiyaan shaqsiga sida uu u egyahay.
Madaxa booliska xaduudaha ee Stockholm, Peter Nilsson, ayaa dhaliilay hadalka wasiir Ullenhag, iyada oo uu sheegay in wasiirka haddii uu hayo cadeymo, in ay ku soo dhoweynayaan in uu soo bandhigo balse isaga uusan arkin cadeymo adag wax yaabo badan oo ku aadan arrinkan oo warbaahinta laga sheegayna ay yihiin kuwa la sammeeyay.
Maria Ferm oo iyana ka tirsan xisbiga deegaanka ayaa sidoo kale dhalleeceysay booliska,iyada oo sheegtay in waxa ay sammeynayaan bileyska ay tahay midib takoor loona baahan yahay in ay joojiyaan.
Ra’iisal wasaaraha dalka Fredrik Reinfeldt ayaa dhankiisa sheegay in Iswiidhan uusan ka jirin hanaan soo galooti oo irdaha u balaqan yihiin balse uu ka jiro qaab socdaal sharciyeysan taasina micnaheedu tahay in sharciga la raaco.
Reinfeldt ayaa intaasi raaciyay in markii qofka dalbada deganaanshaha laga diido codsiga, in booliska lagu wargeliyo in qofkaasi uusan joogi karin dalka waxuuna sheegay in ay tahay arrin xusid mudan haddii taasi ay sammeyn weyso wax micno, in markaasi qof waliba uu iska joogi karo xitaa iyada oo uusan sharci heysan.
Hase yeeshee Ra’iisal wasaaraha ayaa intaasi ku daray in hay’adaha ammaanka ay haboon tahay in ay ahaadaan kuwa si bina’aadanimo ah u dhaqmo oo sharciga raaca balse waxuu sheegay in uusan dooneyn in sii faaqido sida ay u shaqeeyaan booliska.
"Ma han mas’uuliyadeyda in aan sheego waxa saxan iyo waxa qaldan, ayuu Ra’iisal wasaare Reinfeldt ku yiri wakaaladda wararka TT toddobaadkii aynu soo dhaafnay.